Ji Chang Wook နဲ့ Kim Yoo Jung ရဲ့ တွဲဖက်ညီညီသရုပ်ဆောင်မှုကို ချစ်စရာကောင်းစွာ မြင်တွေ့ရမယ့် “Backstreet Rookie” | News Bar Myanmar
Ji Chang Wook နဲ့ Kim Yoo Jung ရဲ့ တွဲဖက်ညီညီသရုပ်ဆောင်မှုကို ချစ်စရာကောင်းစွာ မြင်တွေ့ရမယ့် “Backstreet Rookie”
နာမည်ကျော် webtoon ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းထားပြီး Ji Chang Wook နဲ့ Kim Yoo Jung တို့လို နာမည်ကျော် ပရိတ်သတ်အချစ်တော်တွေပါဝင်မယ့် Backstreet Rookie ဇာတ်လမ်းတွဲကိုတော့ လာမည့် ဂျွန်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပြီး မထုတ်လွှင့်ခင်ကကို ပရိတ်သတ်စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
၂၄ နာရီဖွင့်တဲ့ Convenience Store ရဲ့ပိုင်ရှင်နဲ့ အချိန်ပိုင်းအလုပ်သမလေးကြားက အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ကြည်နူးရယ်မောဖွယ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ Ji Chang Wook ကဆိုင်ပိုင်ရှင် Choi Dae Hyun အဖြစ်ပါဝင်ပြီး Kim Yoo Jung ကတော့ အထက်တန်းကျောင်းသူလေး Jung Saet Byul အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။
ဇာတ်လမ်းရဲ့ poster နဲ့ trailer ထွက်လာကတည်းက မင်းသားနဲ့မင်းသမီးရဲ့ တွဲဖက်ညီမှုကို ပရိတ်သတ်တွေချစ်မဝဖြစ်နေကြပြီး ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့ကလဲ Kim Yoo Jung လေးကို ရိုက်ကွင်းကိုအရယ်အပြုံးတွေနဲ့ အသက်သွင်းခဲ့သူအဖြစ် ချီးကျူးထားတာမို့ တကယ်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲပါပဲ။
Backstreet Rookie ရဲ့သရုပ်ဆောင်တွေဟာ မကြာသေးခင်ကလဲ running man အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါသေးတယ်။ မင်းသားချော Ji Chang Wook နဲ့ မင်းသမီးလေး Kim Yoo Jung ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေလဲ ဒီအချစ်ဟာသဇာတ်လမ်းတွဲလေးကို ကြည့်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပြီလား?
(Zawgyi) Ji Chang Wook နဲ႔ Kim Yoo Jung ရဲ့ တြဲဖက္ညီညီသ႐ုပ္ေဆာင္မႈကို ခ်စ္စရာေကာင္းစြာ ျမင္ေတြ႕ရမယ့္ “Backstreet Rookie”
နာမည္ေက်ာ္ webtoon ကိုျပန္လည္အသက္သြင္းထားၿပီး Ji Chang Wook နဲ႔ Kim Yoo Jung တို႔လို နာမည္ေက်ာ္ ပရိတ္သတ္အခ်စ္ေတာ္ေတြပါဝင္မယ့္ Backstreet Rookie ဇာတ္လမ္းတြဲကိုေတာ့ လာမည့္ ဂၽြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္လႊင့္မွာျဖစ္ၿပီး မထုတ္လႊင့္ခင္ကကို ပရိတ္သတ္စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
၂၄ နာရီဖြင့္တဲ့ Convenience Store ရဲ့ပိုင္ရွင္နဲ႔ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္သမေလးၾကားက အခ်စ္ဇာတ္လမ္းကို ၾကည္ႏူးရယ္ေမာဖြယ္ရိုက္ကူးထားတဲ့ ဒီဇာတ္လမ္းမွာေတာ့ Ji Chang Wook ကဆိုင္ပိုင္ရွင္ Choi Dae Hyun အျဖစ္ပါဝင္ၿပီး Kim Yoo Jung ကေတာ့ အထက္တန္းေက်ာင္းသူေလး Jung Saet Byul အျဖစ္သ႐ုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။
ဇာတ္လမ္းရဲ့ poster နဲ႔ trailer ထြက္လာကတည္းက မင္းသားနဲ႔မင္းသမီးရဲ့ တြဲဖက္ညီမႈကို ပရိတ္သတ္ေတြခ်စ္မဝျဖစ္ေနၾကၿပီး ရိုက္ကူးေရးအဖြဲ႕ကလဲ Kim Yoo Jung ေလးကို ရိုက္ကြင္းကိုအရယ္အျပဳံးေတြနဲ႔ အသက္သြင္းခဲ့သူအျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးထားတာမို႔ တကယ္ကိုၾကည့္သင့္တဲ့ဇာတ္လမ္းတြဲပါပဲ။
Backstreet Rookie ရဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြဟာ မၾကာေသးခင္ကလဲ running man အစီအစဥ္မွာ ပါဝင္ရိုက္ကူးခဲ့ပါေသးတယ္။ မင္းသားေခ်ာ Ji Chang Wook နဲ႔ မင္းသမီးေလး Kim Yoo Jung ရဲ့ ပရိတ္သတ္ေတြလဲ ဒီအခ်စ္ဟာသဇာတ္လမ္းတြဲေလးကို ၾကည့္ဖို႔အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကၿပီလား?
Next လက်နဲ့ထိရုံနဲ့တောင် ပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်တယ်လို့တင်စားရတဲ့ ကိုရီးယားက ကြော်ငြာမင်းသမီး (၈)ယောက် »
Previous « ပရိတ်သတ်တွေကို ချစ်ခင်အားကျစေခဲ့တဲ့ Nayeon နဲ့ Yeri တို့ကြားက ခင်မင်မှုသံယောစဉ်